Ukuhambela okukhethekile kwe-Puri - Ukuvakashelwa Okunethezeka India- Umqhubi Wezokuvakasha eBhubaneswar - 91-993.702.7574
USUKU LWE-01: I-ARRIVAL AT PURI (THUMA NGESIKHATHI SOKUHLALA) - UKONARK - PURI
Ukufika esiteshini sesitimela sasePuri sidlulisela ehhotela. Ngemuva kokuvakasha okusha kwe-Konark Sun Temple, ithempeli likaRamchandi nelwandle lolwandle lwaseChandrabhaga. Ukuvakasha kusihlwa eNkosini Jagannath Temple ukuhlanganyela ku-Live Aalati Darshan, (Abangewona amaHindu abavunyelwe ngaphakathi ethempelini) .Bese ukhululekile e-Golden Beach naseBark Market yasePuri. Ngobusuku ePuri.
Ekuseni ekuseni futhi uvakashele ethempelini leNkosi uJagannath, ethempelini laseGundicha naseTheketh Temple. Khona-ke vakashela eLwandle LwaseChilika eSatapada ukuyobuka i-Irrawaddy Dolphin neLwandle Mouth. En-umzila uvakashela i-Alarnath Temple. Buyela ku-Puri.Drop eSiteshini seSitimela se-Puri sokuya phambili.
Yiba ngowokuqala ukubuyekeza "Ukuhamba Okukhethekile Kwe-Puri" Khansela impendulo